Open Letter to the IFC regarding its Proposed Financing ofaCrony-owned Cement Factory and Coal Mine in Myanmar - Progressive Voice Myanmar
Home Resources Statements Open Letter to the IFC regarding its Proposed Financing ofaCrony-own...
June 7th, 2017 • Author: 174 Civil Society Organizations •7minute read
1. Myanmar Alliance for Transparency and Accountability (national office)
2. EarthRights International (ERI)
3. Bank Information Center
4. Paung Ku Myanmar
6. Ayeayarwaddy West Development Organization, AWDO. (Magway region)
7. Satodetayar Development Organization, SDO.
8. Yoema Chin (Satodetayar)
9. Ayeayarwaddy West Development Organization – AWDO, farmer group. (Ngaphe)
10. Independence Asho Chin Nation Force.
11. Pwintphyu Development Organization
12. Myanmar Alliance for Transparency and Accountability – MATA (Magway)
13. Myanmar China Pipeline Watch Committee – MCPWC (Minbu)
14. Ayeayarwaddy West Development Organization – AWDO, farmer group (Minbu)
15. Thuriya Sandra Environmental Watch Group
16. ရွှေခြံမြေကန်ွရက် ကမွ်းခြံကုန်းမြို့
17. စိမ်းလန်း ပြင်ဦးလွင်
18. Community Response Group – COMREG
19. Tarkapaw Youth Group
20. Kachin Peace Network
21. Peace & Open Society Kyaukse
22. Myanmar-China Pipeline Watch Committee – MCPWC
23. Myanmar Alliance for Transparency & Accountability (Mandalay)
24. Farmer Union Kyaukse
25. ပွိုင့်- ရိုးရာဝန်းကျင် မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့ (POINT-Promotion of Indigenous and Nature Together)
26. Karen Environment and Social Action Network – KESAN
27. Upper Chindwin Youth Network – UCYN
28. Ayeyarwaddy Transparency and Accountability Association (ATAA)
29. Dawei Development Association – DDA
30. IFI Watch Myanmar 31. IFI Watch Kyunsu
32. Green Network Mergui Archipelago
33. The Mergui 88 Generation Open Peace and Open Society
34. တောင်သူလယ်သမားများနှင်လ့ယ်ယာလုပ်သားများသမဂ္ဂ (မြိတ်ခရိုင်)
35. IFI Watch Pakokku
36. Sein Yanung So
37. Natural Green Alliance
38. Transparency and Accountability Network Kachin State (TANKS)
39. Humanity Institute
40. Our future initiative (OFI)
41. Southern Youth
43. မြိတ်မြို့နယ်တောင်သူလယ်သမား သမဂ္ဂ
45. Tanintharyi Fisheries Partnership
46. Tanintharyi Green Network
48. သယံဇာတစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ (တနသာင်္ရီ)
49. သယံဇာတစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ (ပလောက်)
50. ၈၈ မျိုးဆက် (ပုလော)
51. ၈၈ မျိုးဆက် (မြိတ်)
52. အမျိုးသမီးများ သမဂ္ဂ (မြိတ်)
54. NNER – Myeik
55. ABSDF ရဲဘော်ဟောင်းအဖွဲ့
56. ဆရာများသမဂ္ဂ (မြိတ်ခရိုင်)
57. သိန္ဓော သယံဇာတ စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ (တနသာင်္ရီ)
58. ၈၈ မျိုးဆက် (ကော့သောင်း)
62. Our Future Imitative (ဘုတ်ပြင်း)
63. Tanintharyi Fisheries Partnership (ကော့သောင်း)
65. Dawei Watch Fundation
66. ကလုံးထာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီ
67. Community Sustainable Livelihood Development Committee
68. သတ္တုတွင်းစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Min Monitors Group
69. Dawei Youth Fellowship
70. တနသာင်္ရီမိတ်ဆေမျွားအဖွဲ့ Thanintheri Friends
71. Green Generation
73. အမျိုးသမီးများ သမဂ္ဂ (ထားဝယ်)
74. Dawei Pro-bono Lawyers Network
75. Karen Affair Committee
77. အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ပြည်သူကန်ွရက်
81. စာရေးဆရာအသင်း- ဘားအံ
83. Twee Community Development Network
86. Karen Human Right Group
87. Free And Justice
89. Khu Mee Lit: Cult:Association
90. Khu Mee Women Organization
91. Mon Land Development and Natural Resources Conservation Organization
92. Chin Civil Society Network
93. Kanpatlet Environment Conversation Organization
94. Kanpatlet Land Development Organization
95. Matupi Community Development Organization
96. Chin Youth Organization
97. Chinland Natural Resource Watch Group
98. Beauty of Mt. Chin
99. ZCD + ZDA – Zomie Congress for Democracy + Zomie Dress Agency
100. Horn Bill Organization
101. Small Scale Industries Development
102. Chin Green Network
103. Falam Mino Paulkom
104. Kachin Development Networking Group (KDNG)
106. Women League of Burma WLB
107. K’Cho Land Development Association ချိုးမြေဖံွ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်း
108. Open Development Foundation
109. Chin Women Development Organization
110. Yae Kyee Sann
111. Youth Development Network
112. Lut Lat Pwint Lin Social Association
113. Myat Won Thit
114. Myint Ma Kha Guard
115. Public Network
116. EDU Wave
117. Kyauk Gyi Development
118. East Light Development Group
119. Myanmar Youth Star
120. Bago Youth Network
121. Green Equations
122. ကရင်နီပြည် လူငယ်များ သမဂ္ဂ
123. ကရင်နီ အမျိုးသားလူငယ်အစည်းအရုံး
124. ကယန်း မျိုးဆက်သစ် လူငယ်
125. ကရင်နီပြည် တောင်သူ လယ်သမားများ သမဂ္ဂ
128. ထာဝစဉ် စိမ်းလန်းစိုပြေ ကရင်နီပြည်
129. Kayah EarthRights Action Network
131. အထက်ချင်းတွင်း လူငယ်ကန်ွရက်
136. နိစ္စဓူဝ ပညာရေး
137. အင်းသာ ကော်မတီအဖွဲ့
140. တောင်ကုန်းဒေသ စောင့်ကြည့်ရေး
145. နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှား ဆောင်ရက်ွရေးအဖွဲ့
146. တအောင်း ကျောင်းသားလူငယ်အစည်းအရုံး
148. ရှမ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အသင်းအဖွဲ့
149. ၈၈ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်း
152. တရားမျှတမှု စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့
154. ရှမ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အသင်းအဖွဲ့
155. သိန်းနီ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့
157. ကတ်ွခိုင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့
158. ရှမ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အသင်းအဖွဲ့(ရှမ်းမြောက်လူငယ်အဖွဲ့)
160. တအောင်း ကျောင်းသားလူငယ်အစည်းအရုံး
161. အင်းစိမ်းမြေ သဘာဝစိမ်းလန်းစိုပြေရေး
162. တအောင်း(ပလောင်)စ/ယ ကော်မတီ
166. တအောင်းအမျိုးသမီးများ အဖွဲ့အစည်း
167. ၈၈မျိုးဆက်သစ် ငြိမ်း/ပွင့် (ရှမ်း/မြောက်)
168. ၈၈မျိုးဆက်သစ် ငြိမ်း/ပွင့် (ရှမ်း/ရှေ့)
170. လီဆူစာပေနှင့် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဖြွံ့ဖိုးရေးအသင်း
173. မျိုးဆက်သစ် သထုံလေး
174. တောင်သူလယ်သမားများနှင့် မြေယာလုပ်သားများ သမဂ္ဂ